Ikhanda nentamo massage Kungenzeka kukaningi kakhulu ukuvimbela ukubonakala izimpawu zezifo ezihlukahlukene. Zingase zibekwe izimpawu ezifana indlebe ubuhlungu, ukukhwehlela, kokukokoda amathempeli. Njengomthetho, ikhanda nentamo massage kwenziwa kanyekanye.
Ukuvimbela ukungakhululeki, kubalulekile ukwazi indawo amaphuzu athile. I mhlawumbe eyinkimbinkimbi kuphela kungaba eduze ukuthola lezi zingxenye komunye nomunye, kanye imithambo yegazi kanye nezindlala endocrine. Ngakho-ke, ikhanda massage nentamo kufanele kwenziwe ngomusa.
Okokuqala sidinga uphumule. Ukukhiqiza a ikhanda nentamo massage, musa ukubamba umoya wakho noma inkulumo. Uma kukhona imisipha spasm, ukusebenzisa amasu imivimbo ejulile futhi engajulile.
Indlela yokwenza massage entanyeni
Njengoba sekushiwo, umthelela amaphuzu athile (esishintshashintshayo) Uyoqeda noma ukuvimbela ukubonakala izimpawu.
Lapho ephakanyiswe emahlombe kahle selitholakala zone massage okuyinto siboniswa hoarseness, ukukhwehlela, isifuba somoya. Point Itholakala sternum, notch walo ongaphambili omise.
Ngaphansi onqenqemeni engezansi indlebe Lobe itholakala endaweni ingaphakathi, okuyinto lula ngokwenza ekhombisa ezifana tinnitus, ukujuluka ngokweqile, izithulu yesikhashana, amathe. Uhlikihla leli phuzu nethonya elizuzisa isimo labo ezokuthutha nemibhede. Ngaphezu kwalokho, lokhu kwenzani kuma-zone kuboniswe ukukhubazeka we emsipheni ebusweni.
Shona massage. imishini
Exposure, njengoba umthetho, eyenziwa pad ngomunwe phakathi.
Lapho tinnitus, lokujabulela kokwesaba, isiyezi noma ukuluma kwesikhumba kungasiza uhlikihla iphuzu etholakala phakathi parietal ingxenye. Kufanele kuqashelwe ukuthi - indawo ukunakekelwa okukhethekile. Bakholelwa ngakho bonke abantu basempumalanga. Ukwazi leli phuzu, ungakwazi ukususa ikhanda kwanoma iyiphi indawo. Ukuze wenze lokhu, uvalwe ephethe isandla umqhele, ukwenza ngokunyakaza lulwimi yindilinga. Imithi yendabuko uyazicabangela le ndlela iphumelela kakhulu isiyezi, umfutho wegazi ophakeme ngisho unhlangothi.
Ukuthatha iminwe emibili (esiphambanweni) ngenhla ezingeni izinwele zikhula zibheke ngakhona e engaphelele ingxenye kwakungenza okunomthelela uma kwavele kwaqala ngopha emakhaleni, waqala palpitations, noma esimweni rhinitis noma conjunctivitis.
Endaweni ahlangene ithambo yesikhashana futhi okuqondile futhi amaphuzu reflex. Massage yalesi zone ngabe ukuqeda ubuhlungu obuhambisana le neuralgia we emsipheni ebusweni, migraine. Ngokuphumelelayo lokhu nomthelela lapho izinyembezi ngokuzumayo ezayo noma iso ukukhathala.
Ngo esifundeni occipital, maphakathi ukucindezeleka, kukhona indawo, umthelela owenziwa ngesikhathi ubuhlungu entanyeni, ukubukeka isicanucanu futhi ingcindezi futhi kwaphakanyiswa.
Uhlikihla wokugcina amaphuzu amabili zingenziwa kanyekanye.
Lapho ukukhathala Kunconywa ukuchayeka kathathu ngosuku. Ngesigamu zayo zokuqala - ngamahora amabili noma amathathu imizuzu emihlanu noma eyisithupha. Ntambama, kutuswa uhlikihla kanye ngokushesha ngemva kokuhlinzwa, kwesibili - kusihlwa, ihora ngaphambi sokulala.
massage ewusizo Ikakhulukazi kubantu ababeka njalo ukusebenza, nekhanda lakhe phansi uhlobo. Ngaphezu kwalokho, kwaba nomphumela omuhle kakhulu ngesimo ngemva ukucindezeleka futhi ulusizi ngokomzwelo.
Ngemva acupressure is ifanelekile ukuze afeze massage, ekusebenziseni amasu imivimbo ejulile futhi engajulile. Ngakho-ke, isiqondiso ukunyakaza Kunconywa ukuba ngemilenze ku esifundeni parietal.
Naphezu ukusebenza futhi imiphumela emihle massage ku isimo sempilo, kunabantu lowo is contraindicated. Ngakho-ke, kutuswa ngaphambi isicelo elilodwa noma kwenye indawo emzimbeni uye kudokotela uyofuna icebiso.
Kuyini urography izinso? Kwezinso urography excretory nesokulungiselela ke
Izintandokazi, imfashini, ezingaphelelwa isikhathi jini amabhantshi.